Huawei ၏ Nexus သည် Snapdragon 810 | Androidsis
Alexis Martinez | | Huawei, ကို Nexus
Huawei ၏ Nexus နှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ဝေခဲ့သည့်ကောလဟာလများအနက်အချို့ကထောက်ပြသည်မှာ၎င်းတွင်အတွင်း၌ Snapdragon 820 ပါဝင်သည်။ ယုတ္တိရှိပြီးတစ်ခုခုကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်မှာ၎င်းသည်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Qualcomm ပရိုဆက်ဆာသစ်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူရဲ့အများဆုံးပရီမီယံ SoC ။
ဤနည်းအားဖြင့် Snapdragon 810 ကိုကျန်ခဲ့လိမ့်မည်။ SoC သည်ဆိပ်ကမ်းအများအပြားတွင်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိပြီးဆိပ်ကမ်းအတော်များများတွင်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားအပူလွန်ကဲမှုပြhadနာအချို့ရှိသည်။
Snapdragon 820 ကိုမကြာမီတွင်မကြာမီရရှိနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ဤ SoC သည် ၂၀၁၆ အစောပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာသော terminal အသစ်များတွင်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်၊ သို့သော်ဤပရိုဆက်ဆာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့နောက်ဆုံးသိထားသည့်အချက်အလက်များသည်၎င်းသည်ရောက်ရှိရန်အနည်းငယ်ပိုကြာမည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
Huawei ၏ Nexus အတွက် Snapdragon 810 v.2.1?
အဓိကခေါင်းစဉ်သို့ပြန်သွားကာ Huawei Nexus အသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ တွစ်တာရှိ OnLeaks မှယိုစိမ့်မှုအသစ်အရဤ terminal သည် Snapdragon 2.1 ၏ version 810 820 အစား 8994. MSMXNUMX ကိုနံပါတ်တပ်ထားသောဤဗားရှင်းကို OnLeaks မှတရုတ်ကုမ္မဏီ၏ထုတ်ကုန်သစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပေါက်ကြားထားသောပုံတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ Android ရဲ့ bootloader mode ကအနာဂတ် Google terminal နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြသထားတယ်။
စတင်နိုင်ရန်သင်၏ RAM မှတ်ဥာဏ်သည်မည်မျှရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည် 3GB DDR4၊ အခြားထိပ်တန်းအဆင့်ရှိ terminal များဖြစ်သော Galaxy Note5နှင့် OnePlus2တို့၏နိမ့်ကျမှုတို့ကြောင့်ဤ terminal သည်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ အန်းဒရွိုက် 6.0 Marshmallow၎င်းသည်အခြား Android ဗားရှင်းများထက် RAM ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်သင့်သည်။
ဤအရာအားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် Nexus အသစ်ကိုမကြာမီတင်ဆက်ပြသခြင်းမပြုမီကတည်းကဖြစ်သည်။ Google သည်စက်တင်ဘာလတွင်မဟုတ်ဘဲစက်တင်ဘာလတွင် Android ၏အမည်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Nexus LG သစ်၏တင်ဆက်မှု နှင့် Huawei တို့ကာလအတွင်းဖြစ်ပွားနိုင်သည် လာမည့်စက်တင်ဘာလရဲ့အစမှာပြောမရမသိရသေးဘူး။
ငါတို့သိပြီးသားဖြစ်သည် Huawei ၏ Nexus သည် Nexus ထက်ကျော်လွန်နိုင်သည် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံး၏ဤအသင်းအဖွဲ့သည်ဂူဂဲလ်မှတရုတ်စျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်လိုသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည့်အတွက် Mountain View ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရပြီးမဟာမိတ်များသည်ယခုအခါအရာရာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ တရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများနည်းတူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစိုးရဖြစ်နေသည် Huawei သည်တရုတ်အစိုးရ၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကြီး၏အမြင်ကိုပြောင်းလဲရန်ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Huawei ၏ Nexus သည် Snapdragon 810 ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်
Samsung, LG, Sony နှင့် Huawei အတွက် Android drivers တွေကိုဘယ်လို download လုပ်ရမလဲ
Andro Search ဖြင့်သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်ရှိဖိုင်များ၊ အဆက်အသွယ်များနှင့်အက်ပ်များကိုလျင်မြန်စွာရှာဖွေပါ